Bébé & Maman | Univers féminin et de la Mode à Madagascar
Ho an’ireo maniry ny hiteraka mafy
Ho an’ireo zay te hitaraka ndray ity! Sy ireo manana olona tsy mandeha règle, ireo avy nihinana fanabeazanaizana , ireo ménopause, manana olana ao @ utérus, ovaire ,etc… Ireo manana olana @ Progestérone na koa ny l’estrogène dia ity fomba ity no miresoudre ny problème nareo zany hoe manadio tanteraka ny taova ao anatinao ity! […]
NY MAHASAMY HAFA NY PERTES BLANCHES NORMALES SY NY MYCOSE VAGINALE (CANDIDOSE VULVO VAGINALE)):  ny pertes rehefa misy mycose dia tena be dia be, tanteraka mihitsy ny slip. Fa fotsy ny lokony mamaivay, mangidihidy, marary. toy ny ronono mivadika na fromage blanc ny consistance-n’ny pertes, fa tsy fluide. Ny vehivavy bevohoka 3 volana eo […]
Ny tsiranoka avy any amin’ny fivaviana na Perte Blanche
NY PERTES BLANCHES Ny pertes blanches, na koa hoe leucorrhées, dia tsiranoka avy any amin’ny fivaviana. Ny vehivavy dia normal raha misy tsiranoka mandeha, satria lubrifiant hoan’ny vagin iny. Rhf manakaiky ny ovulation , pendant et apres, dia mihabetsaka io. Rhf tsy misy fofona maimbo, maitso, marron, mangidihidy , na lasa te hipipi lava, misy […]
Fanalana ny kibo roroha avy niteraka
NY FAMPIHENANA KIBO Maro ny vehivavy avy niteraka no misy roroha na miroraka ny kibo (bouée) . Anisan’ny tavy sarotra alana ny tavy amin’ ny kibo Misy karazana tavy maromaro mahazo ny kibo. NY KIBO RENY AVY NITERAKA. Rehefa avy niteraka ny vehivavy dia misy elaela vao tafaverina amin’ny laoniny ny taova ao anaty . […]
Manala tanteraka ny tsatsakôtra
TOLOTRA: 1)-Misy karazany 3 ny tsatsakôtra: a)Mivohitra mitsipitsipika mainty kokoa nohon’ny oditra. b)Ny mifanohitra amin’io,zany hoe milentika no fotsy kokoa nohon’ny oditra. d)Mitsipitsipika fotsy,tsotra fotsiny. 2)-Ny tokony hatao,na dia mitondra vohoka aza,na mbola tsisy aza. a)-Raha natavy ianao ka lasa nahia NA nahia no lasa natavy. NA koa eo ampitondrana vohoka. Dia mihitatra sy mihena […]
TOROHEVITRA TSOTSOTRA ILAINA HO AN’IREO MANANA ANKIZY KELY
. –Raha sendra manavy : amin’ny alina dia maka bà kiraro vontosana vinaigre de cidre atao amin’ny tongony -Kohaka:maka ranona voasary makirana tapany dia asiana tantely 2 sotro kely,somary afanaina kely -Tenda:manao gararaka amin’ny ranon-tsira matimaty -Marary loha:mievoka rano mafana atao anaty bol asiana vinaigre de cidre na huile essentielle menthe poivrée -Kaikitry ny bibikely:maka […]
Marary tokoa ny mihetsi-jaza. Voalohany aloha dia tokony efa voahomana tsara daholo ny entana hoentina mamonjy hôpitaly dieny mbola tsy mihetsika ny zaza izany hoe rehefa manomboka ny hoe « miandry andro » ianao dia tokony efa vonona tsara daholo ireo. Rehefa nipoitra taminao daholo ary ny fambara fa ho teraka ianao dia tokony halamina tsara […]
Ireto misy fambara vitsivitsy ahafantarantsika vehivavy na mitoe-jaza na tsia. Maro ireo vehivavy efa ela naniry anaka ka efa mahalala ny toe-batany. Fahataran’ny fadimbolana na ny fivontosan’ny nono ohatra dia anisan’ny fambara voalohany. Azo atokisana kosa ary ve ireo, sao dia hivadika nofy fotsiny? Ny fitondrana vohoka dia manova nyhormone-ntsika vehivavy ary io farany […]
Sirop de navet : Ody koaka an-zazakely
Ahoana ny fanamboarana azy Noho ny navet antiseptiques (manala loto) sy anti-inflammatoires (manala fanaintaina mavaivay) , dia tsara mihitsy izy hiadiana amin’ny kohaka. Masiatsiaka kely ny tsirony fa mandaitra ihany izy! Mividiana navet: Teteho manify dia asio siramamy kely . Alonao miaraka ireo mandritry ny alina. Rahampitso dia alaivo ny rano azonao teo dia ataovy […]